ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရေနက်ဆိပ်ကမ်းစီမံကိန်း Geotechnical ၊Topographic၊ Hydrographic နှင့် MetOceanSurveys စသည်တို့အတွက် အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း | Myanmar Tender Portal
Tender ID: 18844
Geotechnical ၊Topographic၊ Hydrographic နှင့် MetOcean Surveys စသည်တို့အတွက် အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကွင်းဆင်းလေ့လာဆန်းစစ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
တင်ဒါခေါ်ယူမှုစတင်သောရက်စွဲ။၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၅ရက်
ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွား‌ရေးဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Sea Port Co., Ltd (စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire) တို့သည် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုသဘောတူစာချုပ် (Concession Agreement) ချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်ရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire အနေဖြင့် ရမ်းဗြဲကျွန်းဆိပ်ကမ်း၊ မဒေးကျွန်းဆိပ်ကမ်း၊ ယင်း တစ်ကျွန်းနှင့် တစ်ကျွန်းအကြား ပေါင်းကူးတံတား၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန် စက်မှုဇုန်သို့ ခန့်မှန်း ခြေ ၁၅ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသောဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ပါဝင်သော မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် ရေနက်ဆိပ်ကမ်း (စီမံကိန်း) တည်ဆောက်ရန် ပုံဖော်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်မှု၊ ငွေကြေးထည့်ဝင်မှု၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာတို့ အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသူ Concessionaire ၏ ဦးဆောင်အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်သော CITIC Consortium Myanmar Port Investment Limited (Client) အနေဖြင့် စီမံကိန်း၏ပထဝီနှင့် မြေမျက်နှာသွင်ပြင်ဆိုင်ရာ ပဏာမဆန်းစစ်ချက် Preliminary Geotechnical & Topographic Survey (အလုပ်များ)ကို Concessionaire အားကိုယ်စားပြုပြီး ဆောင်ရွက်သွားရန် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်သည်။ ယခုသည် အထက်ဖော်ပြပါ အလုပ်များအတွက်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူလုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents)များ ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်များ၏ အသေးစိတ်ရည်ရွယ်ချက်မှာ Technical means of engineering (Geological exploration, Geotechnical Experiment, Topographic Survey, Bathymetric Survey, Meteo- rological and Hydrological data collection and observation, etc.,)ဖြင့် စီမံကိန်း တည်နေရာ အတွက် Geological၊ Topological၊ Hydrological၊ Meteorological စသည်တို့အပြင် အခြားသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များ ပြုစုရယူပေးရန်နှင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများအတွက် စီမံချက်နှင့်ဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်းတို့တွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို ပြုစုပံ့ပိုး‌ပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။
အလုပ်များနယ်ပယ်အတိုင်းအတာတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များပါဝင်သည်-
(၂) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ(RFP Documents) Electronic Versionအား ဝယ်ယူရရှိရန်အတွက်‌ အမေရိကန်‌ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀အား ဖော်ပြပါ ဘဏ်အကောင့်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်း။
(သတ်မှတ်ငွေပမာဏ လွှဲပြောင်းဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents) Electronic Version အားရယူနိုင်ရန် Web link တစ်ခုချပေးမည်ဖြစ်၍ ပေးသွင်းပြီးငွေကို ပြန်လည် ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြန်၍အမ်းယူခြင်း လုံးဝမပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းကို သတိပြုရန်လိုပါသည်။ )
စိတ်ဝင်စားသူ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လျှောက်လွှာတင်ခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents)ဝယ်ယူခြင်းတို့ကို ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်နေ့ (မြန်မာစံတော်ချိန် မွန်းလွဲ ၃နာရီ) ထက်နောက်မကျပဲ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားရန်ဖြစ်သည်။
လိပ်စာ –No. (B-02-01), Golden City Business Center, CMA Old Building, Yankin Road,
တာဝန်ခံ –Mr. Zhu Xuyang (Email: zhuxy20@citic.com ; Tel: +95-9-979331299,+86-13522748848) Mr.
Yan Xiaoxian (Email: yanxx2@citic.com ;Tel: +95-9-445339138, +86-13811615808)
ဘဏ်အကောင့် - 694271050401 (SWIFT CODE: KWHKHKHH) at CHINA CITIC BANK
INTERNATIONAL LIMITED (Bank Code: 018)
(၁) ဤတင်ဒါခေါ်ယူမှုကြော်ငြာကို အောက်ဖော်ပြပါ websitesများတွင်လည်း ဖတ်ရှုရယူနိုင်ပါသည်။
-Facebook Account:CITIC Myanmar
(၂) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံလွှာ (RFP Documents)တွင် ပါရှိသော အသေးစိတ် သတ်မှတ်ချက်များအရ တင်ဒါလျှောက်လွှာများ သို့မဟုတ် အဆိုပြုလွှာများကို တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
(၃) တင်ဒါပြင်ဆင်မှု သို့မဟုတ် တင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်လျှောက် ကျသင့်သော အခြားအထွေထွေ ကုန်ကျငွေများအားလုံးကို Client ဘက်မှ တာဝန်ခံမှုနှင့် တာဝန်ယူမှု လုံးဝမရှိကြောင်းကို သတိပြုရန် ဖြစ်သည်။
(၄) လုပ်ငန်းအဆိုပြုတောင်းခံမှုလုပ်ငန်းစဉ် (RFP Process ) အတွက် အခြားသီးသန့်ထပ်တိုး အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် အထက်ပါရည်ညွှန်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ပြီးဆုံးပြီးနောက် ရရှိလာမည့် စာရွက်စာတမ်းများ၌ ပါဝင်ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
(၅) Online Briefing Meeting အားစီစဉ်ထားရှိပြီးယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော အစီအစဉ်များကို successful applicants လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။